Maitiro ekuisa iOS 8.4 pane yako kifaa | IPhone nhau
Apple yakaburitsa iOS 8.4.1 maawa mashoma apfuura, iine kuvandudzwa kweApple Music, asi nekukanganisa kwakabvisa kusagadzikana kwakabvumidza shanduro dzekare kuve Jailbroken uchishandisa TaiG. Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukagadzirisa kune iOS 8.4.1 haugone kuJailbreak, zvirinani izvozvi. Asi kuchine mikana yekuisa iyo yapfuura vhezheni, iOS 8.4, iri panjodzi yeJailbreak. Ichave kwenguva pfupi, kusvikira Apple yamira kusaina iyo vhezheni, saka unofanira kukurumidza. Isu tinokupa iwe rairo yekuti ungazviita sei, kusanganisira kurodha pasi kurodha pasi.
1 Dhawunirodha yakakodzera firmware
2 Isa iyo kuburikidza iTunes
Dhawunirodha yakakodzera firmware
Ndicho chinhu chekutanga chaunoda kuti ukwanise kuisa iOS 8.4. Pazasi iwe une zvinongedzo, unofanirwa kusarudza iyo inoenderana neyako kifaa.
iPad Mhepo 2 (WiFi)
iPad Mhepo 2 (WiFi + Cellular)
iPad Mhepo (WiFi + Cellular)
iPad Mhepo (WiFi)
iPad Mhepo (CDMA)
Isa iyo kuburikidza iTunes
Isu tatova neyedu firmware yakadzvanywa kune komputa yedu, uye ikozvino tinofanirwa kubatanidza mudziyo wedu uye kuvhura iTunes. Kana isu tikabaya pane Dzosera iPhone bhatani, ichaisa yazvino vhezheni inowanikwa, uye ndizvo zvatiri kuda kudzivirira, saka isu tinofanirwa kubaya Dzosera iPhone bhatani isu tichichengeta pKudzvanya iyo Alt (Mac OS X) kana Shift (Windows) bhatani pane iyo keyboard. Iwindo rinobva ravhurwa matinofanirwa kusarudza iyo ipsw faira ratichangotora uye maitiro acho anotanga. Rangarira kuti kana iwe uine "Tsvaga yangu iPhone" yakamisikidzwa, unofanirwa kuimisa kuti udzorere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 8 » Maitiro ekuisa iOS 8.4 pane yako kifaa
Diego Armando akadaro
Pindura kuna Diego Armando
Microsoft Word, Powerpoint uye Excel zvakagadziridzwa panguva imwe chete